यस्तो जाडोमा आगो लागेर घर नष्ट हुँदा २५ परिवारको विजोक – NepalajaMedia
January 28, 2021 173
तिला गाउँपालिका–७ जुम्ला पोखरीस्थित गोठीगाउँमा लागेको आगोबाट जलेर मङ्गलबार २५ घर नष्ट भएका छन् ।सदरमुकाम जुम्ला खलङ्गादेखि ३५ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त गाउँमा मङ्गलबार सुधारिएको चुल्होको पाइपबाट छतमा भएको घासमा सल्केको आगो गाउँभरि फैलिएपछि २५ घर जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक युवनकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार घरसँगै २० देखि २५ पशुचौपायाको जलेर मृत्यु भएको छ । “स्थानीयवासीले दिएको सूचनाअनुसार आगलागी साँझ करिब ७ बजेतिर भएको रहेछ”, उनले भने । उनका अनुसार खबर पाउने बित्तिकै तिला–१ रारालिही प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक भुपेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा तीन र कुडारी प्रहरी चौकीका प्रहरी जवान नरेन्द्र देउवासहित तीन गरी छ जनाको टोली तत्काल घटनास्थलमा पुगेको थियो ।
रासस यो पनि हेर्नुहोस। विदेशीले नेपाली बोलिदिंदा हामीलाई निकै नै खुशी लाग्छ । नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराएर माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्यकी एक हुन् विउन्सी ।
उनी अफ्रिकन हुन् । लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी विउन्सीले राम्ररी नेपाली बोल्न जाछिन् । नेपाली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लयमा गाउन जान्दछिन् । उनको बोली र गीतले सबैलाई आर्कषित गदर्छ ।
लकडानका कारण आफ्नो देश फर्कन नपाएकी विउन्सीलाई नेपालको मायाले तानेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘लकडाउनको समयमा म यता बस्न बाध्य भएँ । र यही लकडाउनकै समयले मलाई नेपाल र नेपालीप्रतिको मायामा अल्झायो । मलाई नेपालीसंगै बिहे गर्न मन छ ।
मलाई नेपाली खाना मन पनि पर्छ ।’ नेपाल र नेपाली प्रतिको प्रेमलाई बताउँदै विउन्सीले आफुलाई मन पर्ने लोक गीत पनि गाएर सुनाईन् । उनी नेपाली लोक गीत निकै नै राम्रोसंग गाउने रहेछिन् ।
विउन्सीले एउटा नेपाली फिल्मकोलागी गीत पनि गाई सकेकी छन् । उनले द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खडकीको फिल्मकोलागी एउटा गीत गाएकी छन् । विउन्सीले नेपालका धेरै कुरा सिकी सकेकी छन् । विशेषगरी उनले नेपाली सबै प्रकारको संस्कृतिहरुलाई रुचाएको बताउँछिन् ।
विउन्सीले नेपालको राजनीतिलाई पनि नियालेको बताउँदै उनले हाल नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको पनि बताईन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम स्पष्ट रुपमा उच्चारण समेत गरिन् ।
Prevकिन दोहोर्‍याएर यौ’न स’म्बन्ध राख्न मन लाग्छ ?
Nextअ’ल्सरको स’मस्याले ग्रस्त हुनुहु’न्छ ? पिउनुहो’स् मात्र यो एक ड्रिं’क्स, मिल्छ राह’त